CR7 oo la dhacsan inuu ka mid yahay musharixiinta Ballon d'Or. - Caasimada Online
Home Warar CR7 oo la dhacsan inuu ka mid yahay musharixiinta Ballon d’Or.
CR7 oo la dhacsan inuu ka mid yahay musharixiinta Ballon d’Or.
Weeraryahanaka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in loo doorto liiskakama dambeysta ah ee abaal marinta Ballon d’Or.
Kabtanka xulka Portugalayaa waxaa liiskaan ku wehliya xidigaha kooxda Barcelona Andres Iniesta iyo Lionel Messi oo kasoo laabtay xilli ciyaareed cajiib ah, halka uu Cristiano 46 dhaliyey xilli uu saftay 38 kulan oo horyaalka ah wuxuuna Real Madrid ka caawiyey Inay ku guuleysato La Liga.
Ronaldo ayaa rajeynaya in wixii uu sameeyey xilli ciyaareedkii hore ay uga filnaato inuu raga la xafiiltama abaal marintaan uga guuleysto markii ugu dambeysay ee uu qaaday waa 2008dii.
“Aniga ahaan farxad ayey ii tahay inaan ka mid noqdo musharixiinta Ballon d’Or iyo Fifa’s World 11, aad ayaana ula dhacsanahay,” ayuu u sheegay website-ka kooxdiisa los Blancos’.
“Waa laba abaal marin oo aad u fiican waxaana rajeynayaa inaad ka mid noqoto musharixiinta waa inaan markii hore shaqo adag soo qabtay iyo taageerada asxaabta aan isku kooxda nahay, Real Madrid iyo asxabteydaPortugal.”
Waxaa Qoray: Ahmed Jaangoan